Tartanka Koobka Premier League Ee Xili Ciyaareedka Cusub Oo Xiiso Gaar Ah Yeelan Doona Iyo Sababta Ay Liverpool Ugu Farxi Karto Ganaaxa City Laga Qaaday. - Gool24.Net
Tartanka Koobka Premier League Ee Xili Ciyaareedka Cusub Oo Xiiso Gaar Ah Yeelan Doona Iyo Sababta Ay Liverpool Ugu Farxi Karto Ganaaxa City Laga Qaaday.
Saadaasha muuqan karta ee tartanka koobka Premier league ee xili ciyaareedka cusub ayaa ah mid xiiso badan yeelan doona maadaama oo ay jiraan isbadalo keeni kara in tartanku noqdo mid ka balaadhan sidii uu ahaa dhawrkii sanadood ee ugu danbeeyay.
Saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay waxa uu tartanka Premier League ahaa mid si toos ah ugu dhexeeyay Manchester City iyo Liverpool oo koobka Premier league dhexdooda kus oo guulaystay saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay.
Laakiin xaalada ayaa noqon karta mid gabi ahaanba ka duwan sida ay soo ahayd iyada oo ay jiraan sababo cadaan ah oo keeni kara isbadal layaableh balse Liverpool ayay dhinac farxad uga tahay in Man City laga qaaday ganaaxii Champions league.
Xili ciyaareedka cusub ee Premier league ma noqon doono mid waqti badan la sugi doono maadaama oo waqti badani ku lumay go’doonkii farayska ee xili ciyaareedka dib u dhigay waxaana la sugayaa in labada xili ciyaareed ay noqo doonaan kuwo aynu wax waqti la sheegi karaa u dhexayn doonin.
Waxaa meesha ka bixi doona fasixii xagaaga ee ay kooxuhu xili ciyaareedka cusub waqti badan ugu diyaar garoobi jireen iyo fasixii ciyaartoyda la siin jiray waxayna taas badalkeeda kooxuhu heli doonaan waqti kooban oo ay isku diyaariyaan.
Maxay Tahay Sababta Ay Liverpool ugu Farxi Karto Ganaaxa Man City Laga Qaaday Ee Champions league?
Liverpool waxay wali kooxda ugu awooda badan ee Premier league u aragtaa Manchester City waxayna hadda si cad u garan karaan in Guardiola uu samayn doono saxiixyo muhiim ah si uu u soo yareeyo farqiga kooxdiisa City iyo Liverpool xili ciyaareedkan u dhexeeyay.
Laakiin sababta kaliya ee ay Liverpool ugu farxayso in Man City ganaaxii Champions league laga qaaday waa in tartanka Champions league uu City siin karo in ayna diiradeeda ku soo wada koobin koobka Premier league oo kaliya taas oo Liverpool xaalada ku adkayn kari lahayd.
Haddii Man City si rasmi ah looga ganaaxi lahaa Champions league, waxa kaliya ee ay dareenkooda oo dhan ku eegi lahaayeen waxa uu noqon lahaa Premier league, waxay heli kari lahaayeen waqti badan oo ay ugu nastaan kulamada taas oo keeni kari lahayd in ay koobka Premier league markale ku guulaystaan.
Sidaa daraadeed, in kooxda Guardiola ay Champions League ka ciyaari doonto xili ciyaareedka cusub waxay Liverpool siinaysaa in fursad isku mid ah ee dhinaca nasashada iyo diyaar garowga kulamada ay la yeelan doonto Man City.
Sababta uu xili ciyaareedka cusub ee Premier league ku noqon doono Mid xiiso gaar ah yeelan doona?
Liverpool waxay isku dayi doontaa in ay sida ugu adag u difacaato koobka Premier league, waxay Manchester City samayn doontaa wax walba oo saxiixyo ah si ay awoodeeda sare ugu soo qaado isla markaana ay u buuxiso boosas muhiim ah oo banaan sida David Silva oo baxaya iyo meelo la mid ah.
Waxay tani keeni doontaa in Liverpool iyo Manchester City ay markale noqon doonaan labada kooxood ee ugu cad cad ee koobka markiiba loo saadaalin doono balse arintu intaas way ka balaadhnaan doontaa.
Manchester United waxay ugu danbayn u muuqataa mid xili ciyaareedka cusub ku tartami karta koobka Premier league laakiin waxaa ku xidhan shuruudo ah haddii ay sameeyaan saxiiyo kooxdooda soo gaadhsiin kara heerka Manchester City iyo Liverpool iyo haddii uu Solskjaer sii joogteeyo horumarka uu kooxda ku sameeyay intii uu Bruno Fernandes helay.
Chelsea waxay haddaba samaysay saxiixyada ugu muhiimsan ee xili ciyaareedka cusub kooxdeeda sare u soo qaadi doono laakiin walwalka kaliya ee ay Blues qabto ayaa ah qaab ciyaareed joogtayn la’aanta kooxda Frank Lampard.
Balse waxaa hubaal ah in Chelsea ay xili ciyaareedka cusub noqon karto mid ka mid ah kooxaha sida dhabta ah ugu tartmi kara koobka Premier league.
Waxaana halkan ka muuqan karta in kooxaha Liverpool, Manchester City, Man United iyo Chelsea ay noqon karaan afarta kooxood ee tartanka ugu wayni ku dhex mari karo koobka Premier League halka Arsenal iyo Tottenham ay yihiin kooxo aan ilaa hadda safka hore lagu qiimayn karin.
Jose Mourinho ayaa heli doona xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee dhamaystiran oo uu iskugu dayi karo in uu Tottenham ka saaro abaarta koob la’aanta balse waxay ku xidhaan doontaa isbadalka uu kooxda ka sameeyo.
Haddaba akhriste, miyaad filaysaa in kooxaha Chelsea iyo Man United ay noqon doonaan labada kooxood ee sida dhabta ah Liverpool iyo Man City ugula tartami kara koobka Premier League?
Asc anigaq ahaan maqabo inay Chelsea iyo united tartan dhab ah ugalidoonan Eplka waase umaleenaa inayna Kalmaha hoose aadi donin